Maxaa la arkaa - Wararka Safarka | Wararka Safarka (Bogga 2)
Kamakura, meel loo aado Japan
Kamakura waa mid ka mid ah dalxiisyada caadiga ah ee laga sameyn karo Tokyo, caasimadda Japan. Haddii adduunka ...
Sannadkan 2020-ka ah ee aadka u xun wuu dhammaanayaa.
Koonfurta Ameerika, godka Río de la Plata, waxaa ku yaalo dal yar oo la yiraahdo Uruguay. Isaga…
Vladivostok waa magaalo Ruush ah oo aad ugu dhow xadka ay la wadaagaan Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya. Waa…
Safarka Buuraha Ural
Buuraha Ural waxaa loo tixgeliyaa xadka dabiiciga ah ee u dhexeeya Yurub iyo Aasiya. Waa buuro qurux badan oo socda ...
Muuqaal ay safrayaal badani raadsadaan wuxuu leeyahay xeebo, qorrax iyo biyo huruud ah. Waxaa jira dhowr meelood oo leh astaamahan, laakiin ...
Sarajevo waa caasimada Bosnia iyo Herzegovina, oo ah magaalo leh cagaar badan, taas oo ku taal doox ku wareegsan ...
Riyada riwaayad walbo waa inay u safarto Los Angeles si ay u booqato gees kasta oo ka mid ah Magaalada ...
London oo caruur leh
Waxaa jira magaalooyin aad saaxiibtinimo ugu leh booqashada carruurta maadaama ay bixiyaan dalxiisyo, matxafyo, dhaqdhaqaaqyo, qaab fudud oo si fudud loo maro.
Wadamada Bartamaha Ameerika
Ameerika waa qaarad aad u ballaadhan oo u socota gees ilaa gees adduunka. Waxaa jira dalal badan, laakiin shaki la'aan ...
Adduunku waa weyn yahay oo markaan qorsheynayno safar, sida aan jeclaan lahayn inaan waqti iyo lacag u helno ...
Maxaa laga qabanayaa Dresden
Dresden waa magaalo Jarmal ah, caasimada gobolka Saxony. Waa magaalo duug ah, dhaqameed aad u wanaagsan, aad u wanaagsan haddii aad jeceshahay ...
Toddobada yaabab ee Dunida
Laga soo bilaabo 2007 waxaa jira 7 layaab oo cusub ee Dunida casriga ah oo lagu xushay sahan caalami ah in kabadan 90 ...
Transylvania, dhul soo jiidasho iyo qarsoodi ah
In Latin Transylvania waxaa loola jeedaa "dhul ka baxsan keynta." Runtii waa dhul qurux badan oo buuro iyo keymo leh. Magacaaga…
Waxaa jira wadiiqooyin macmal ah oo aadamuhu dunida dhistay oo adduunka caan ka ah. Mid ka mid ah waa ...
Waxaan jecelahay meelaha aan macquul ahayn, kana baxsan wadada la garaaco. Waana sababta oo ah in ka badan dalxiis ahaan waxaan jeclahay inaan dareemo ...
Mid ka mid ah wabiyada ugu caansan adduunka shaki la’aan webiga Niil ha ii sheegin ma leh ...
Maxaa lagu arkaa Lima
Mid ka mid ah caasimadaha ugu xiisaha badan ee lagu booqdo Koonfurta Ameerika waa Lima, caasimadda Peru. Waa qalbiga ...
Maxaa lagu arkaa Mongolia
Mongolia. Kaliya magaca ayaa isla markiiba noo qaadaya dalal fog oo qarsoodi ah, oo leh soojiidasho millen. Waa dal weyn, oo aan ...
In muddo ah hadda, Kuuriyada Koonfureed waxay saarneyd bushimaha malaayiin qof oo ...
Agadir, meel loo maro Morocco
Markay dhaafto qof waliba wuu joogi doonaa isagoo sugaya martida. Ka waran safar gaaban oo aad ugu baxdo Morocco? Sidee ku saabsan safarka ...
Maxaa lagu arkaa Bologna
Talyaanigu waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago Yurub. Taariikhda, dhaqanka, muuqaalka muuqaalka ... Qof baa maalmo badan ku dhex wareegi kara ...
Maxaa lagu arkaa Yucatan
Mexico waa wadan dalxiis badan, leh kumanaan sano oo taariikh ah iyo muuqaal qurxoon. Mid ka mid ah xarumaheeda dalxiiska ...
Waxaa lagu dhawaaqay xarun farshaxan-farshaxanimo tan iyo 1982, Alcalá del Júcar waa mid ka mid ah degmooyinka ugu quruxda badan Spain. Waxay ku saabsan tahay…
Safarka Lake Baikal
Harooyinka biyaha macaan ee ugu weyn adduunka, mug ahaan, waa harada Bailkal. Ka kooban biyo ka badan ...
Uzbekistan, waxay ku sii jeedaa Aasiya
Adduunku waa weyn yahay waxaana jira meelo badan oo la booqdo ... Haddii aan ka tagno Ameerika, Yurub iyo kuwa ugu caansan ee ...
Meelaha ugufiican ee laga daawado qorrax dhaca
Qorrax dhaca waa mid ka mid ah daqiiqadaha ugu xiisaha badan maalinta. Sawirka qorraxdu u dhacdo cirka waa ...
Mid ka mid ah degmooyinka ugu quruxda badan gobolka Ciudad Real iyo Almagro waa Villanueva de los Infantes, ...
Mid ka mid ah magaalooyinka miisaankeeda leh taariikhda waa Nuremberg. Waxaan u maleynayaa inaynu waxbadan ka garaneyno buugaagta ...
Maxaa lagu arkaa Florida
Mid ka mid ah gobollada ay ka kooban tahay Mareykanka waa Florida. Waa gobol dad badani ku nool yihiin iyo juquraafi ahaan ...
Maxaa lagu arkaa Hong Kong
Hong Kong waa meel kaladuwan, hodan ah, deeqsi ku ah booqdaha, aad u xiiso badan ... Waxaa haboon in magaaladan la booqdo dhowr maalmood ama ...
Waxa lagu booqdo Filibiin
Filibiin waa meel safar aad u weyn. Waxay leedahay meelo badan oo xiiso leh waana taas sababta ay ugu baahan tahay safar gebi ahaanba ka duwan ...
Maxaa lagu arkaa Australia
Mid ka mid ah waddamada ugu yaabka badan ee safarka lagu baxo waa Australia: waxay leedahay nooc kasta oo muuqaal ah, waa mid casri ah, leh ...
Cumaan, meel aan caadi aheyn
Sideed u aragtaa inaad safar ugu baxdo Cumaan? Waxaa laga yaabaa inaysan ku jirin liiska meelaha ugu dalxiiska badan ...
Maxaa lagu arkaa magaalada Zurich
Magaalada ugu weyn Switzerland waa Zurich, xarunteeda dhaqaale, dhaqaale iyo jaamacadeed. Waxaad ku imaan kartaa halkaas diyaarad, wadada ...
Antwerp, meel loo maro Flanders
Antwerp waa caasimada gobolka isla magacaas, oo ku yaal Flanders. Waa magaalo qurux badan, kaliya 40 ...
Maxaa lagu arkaa magaalada Florence 3 maalmood gudahood
Florence waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Talyaaniga. Waxay ku leedahay madxafyo meel kasta, kaniisadihii hore, fagaarayaasha soo jiidashada leh, wanaagsan ...
Waxa lagu arko Madagascar
Jamhuuriyadda Madagascar waa waddan jasiirad ah oo ku dhex yaal badweynta Hindiya ee quruxda iyo diiran. Waa jasiiradda ...
Colombo oo ku taal Sri Lanka
Waxaa loo yaqaan "jasiiradda kunka magac" maxaa yeelay taariikhda oo dhan waxaa lagu yaqaanay dad badan ...
Las Hurdes ma aha dhul dib u dhac ah oo Buñuel uu ku sawiray. Maanta waxay ku siinayaan muuqaal qurxoon iyo gastronomy aad u wanaagsan.
Hungary waxaa laga yaabaa inay tahay wadan yar laakiin waxay leedahay goobo badan oo UNESCO ay u aragto inay uqalmayaan in loo aqoonsado Hidaha Dunida. Goorma…
Maxaa lagu arkaa magaalada Saint Petersburg
Dad badan, St. Petersburg waa sababta kaliya ee ay u booqdaan ama u booqdaan Ruushka. Taariikhi ah oo aad u qurux badan, tan ...
Hue, meel loo socdo Vietnam
Mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee lagu tago Vietnam waa Hue, oo ah magaalo qadiim ah oo mar caasimad u ahayd dalka ...
Maxaa lagu arkaa Jaca
Haddii aad la yaabtay waxa lagu arko Jaca, waxaan kuu sheegi doonaa in magaalada Aragonese ay hodan ku tahay hidaha taariikhiga ah waxayna leedahay muuqaallo qurux badan oo Pyrenean ah.
Haddii aad jeceshahay qubeyska kuleylka ah iyo dabeecadda duurjoogta ah, had iyo jeerna dhib badan tahay, markaa waa inaad booqataa Iceland. Raiisel wasaaraha ayaa ku dhawaaqay ...
Maxaa lagu arkaa Amsterdam 3 maalmood gudahood
Amsterdam waa caasimada Holland, oo ah meel diirada saareysa waxyaabo badan oo xiiso leh si loo arko loona sameeyo, kadib ...
Bath, oo ah meel Ingiriis aad u socoto
Haddii aad jeceshahay sheekooyinka Jane Austen ama filim kasta oo Ingiriis ah oo dhacaya qarnigii XNUMXaad, markaa hubaal ...
Maydhashada Carbeed ee Granada
Qubays wanaagsan waa nasasho, jidhka iyo nafta. Dhaqamo badan ayaa sidaas u fahmay, in kastoo ay ...
Maxaa lagu arkaa Budapest
Budapest waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Yurub si ay safar ugu baxaan. Dalxiisayaasha ...
Abuuritaanka xuduud dabiici ah oo udhaxeysa Mareykanka iyo Kanada, Niagara Falls waa muuqaal dabiici ah oo ka kooban seddex biyo-dhac ...
Safar loo maro Kapadosiya
Mid ka mid ah kaararka ugu caansan ee Turkiga waa Kappadocia, oo ah gobol taariikhi ah oo ku baahsan dhowr gobol oo leh ...
Mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago caasimada UK waa Taawarka London. Markaan soo laabto…
Cambodia waa boqortooyo ku taal Koonfur-bari Aasiya waana mid ka mid ah luulyada dalxiiska ee halkan ku xeeran, oo ay weheliso ...
Kenya iyo Dhaxalkeeda Dunida
Afrika waa qaarad cajaa’ib leh haddii aad jeceshahay dabeecadda iyo duurjoogta. Halkan, mid ka mid ah kuwa ugu ...
Delphi, oo ku taal Griiga
Giriiggu waa meesha loo socdo ee uusan safaruhu seegi karin. Waxay leedahay wax walba: gastronomy la yaab leh, taariikh badan, dhaqan badan iyo ...
Waxaan kuu sheegeynaa qaar ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan ee lagu arki karo aagga Ribeira Sacra ee Galicia.
Haddii aad booqanayso Norway, markaa Bergen ayaa ku jiri doonta liiskaaga maadaama ay tahay magaalada labaad ee ugu weyn ...
Koonfurta Ameerika waa meel aad u qurux badan, dhul taariikh taariikhi ah leh iyo muuqaal qurxoon. Isha Yurub waxay ka kooban tahay, ...
Maxaa lagu arkaa Turkiga
Jamhuuriyadda Turkiga waxay kala qeybisaa dhulkeeda Yurub iyo Aasiya, waana dhul hodan ku ah ...
Booqo lamadegaanka Namib
Dhulkeenu wuxuu leeyahay muuqaal qurxoon oo iskhilaafsan si isku mid ah. Waxaa jira maraakiib dhagax ah, keymo kuleyl ah, xeebo riyadeed, buuro dillaaca ...
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo la arki karo iyo sida loo tago Ézaro Waterfall ee Wabiga Xallas ee Galicia.
Kaadhadh badan oo ka socda Maraykanka ayaa caan ku noqday shineemada maantana waxaan ku darnaa mid ka mid ah liiska: ...
Maxaa lagu arkaa Chinchón
Waxaa jira dad badan oo qeexaya Chinchón inay tahay magaalada ugu quruxda badan Madrid maadaama ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ...
Muddo dheer horumar ayaa u muuqan waayey dalalka Waqooyiga Yurub, laakiin dhammaadkii the
Naples iyo quruxdeeda
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Talyaaniga waa Naples oo ah caasimada Campania. Sidoo kale waa goob dalxiis oo aad u wanaagsan horeyba ...
Turin waxay ahayd caasimaddii Boqortooyada Paimonte-Sardinia, oo mas'uul ka ahayd midowgii Talyaaniga. Waxay ku siineysaa taallooyin tiro badan iyo gastronomy aad u fiican.
Cape Town waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Koonfur Afrika sidaas darteedna waa mid ka mid ah meelaha loo tago ...
Maxaa lagu arkaa Kyoto
Maanta Japan waxay ku jirtaa moodo. Labaatan sano ka hor ma lahayn dalxiis aad u badan laakiin shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay ayaa ...
Waxaan kuu sheegeynaa waxa laga arki karo Beerta Dabiiciga ah ee Torres del Paine Natural oo ku taal Chile, oo leh harooyin baraf leh, buuro iyo baraf.
Aad ugu dhow Barcelona, ​​magaalada Caldes de Montbui ayaa caan ku ah biyaha kuleylka. Laakiin sidoo kale waxay ku siineysaa taalooyin iyo gastronomy hodan ah.
Maxaa lagu arkaa Calaceite
Soo ogow waxa aan ka arki karno magaalada Calaceite, oo ah meel aad ka heli karto magaalo quruxsan oo duug ah iyo hiddo muhiim u ah.
Toddobaadkan wuxuu gaar u yahay kuwa ku raaxeysta yaababyada dhulka hoostiisa ku jira, safarada carruurta ama muuqaalada ...
Cuevas del Águila, yaab dhulka hoostiisa ah
Godadku waa meelo fantastik ah oo dad badan oo qadiim ah ay umuuqdeen sida laga soo galo dhulka hoostiisa. Ka fog sixirka, waa ...
Duqa Magaalada Barrena
Mayor-ka Bárcena waa magaalo yar oo ku taal baadiyaha Cantabria taas oo umuuqata inay kuxirantahay waqtiga. Waxay ku siinaysaa jidadka buuraha, xasilloonida iyo caloosha qaniga ah.
Booqo San Pedro Alcántara
Isbaanishku wuxuu leeyahay meelo dalxiis oo badan oo laga yaabo inaysan caan ku ahayn booqdayaasha shisheeye. Hagaag, waa waqtigii ...
Maxaa lagu arkaa Bali
Mid ka mid ah meelaha ugu caansan uguna caansan adduunka ee loo dalxiis tago waa jasiiradda Bali. Haddii aan ka hadlayno quruxda, ...
Pyrenees Aragonese, yaabab dabiici ah iyo taariikh badan
Pyrenees Aragon waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Spain. Waxay ku siineysaa yaabab dabiici ah, magaalooyin qurux badan iyo cunno macaan.
Ku soo wareego Buundada Brooklyn
New York waa mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu wanaagsan waxayna leedahay astaamo badan oo qof kasta oo dalxiis ahi doonayo inuu ogaado. Mid…
Disneyland waa shirkad caalami ah waxayna ka dhistay "laamo" meelo kale oo adduunka ah, markaa dadku ma haystaan ​​...
Taariikh ayaa jirtay waqti Faransiisku ka buuxo qalcado. Suugaan ahaan. Dhammaantood ma wada badbaadeen marinka ...
Magaalooyin qurux badan oo u dhow Madrid
Madrid waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Yurub. Laakiin, aad ugu dhow magaalada weyn, waxaad ka heli doontaa magaalooyin soo jiidasho leh oo ay tahay inaad booqato.
Waxa lagu arko Écija
Waxaan ku tusineynaa waxa laga arki karo magaalada Écija ee Andalus, oo ah meel taariikh weyn leh, dhismayaal qurux badan iyo haraaga qadiimiga ah.
Maxaa lagu arkaa Kobanheegan
Maanta wadamada Waqooyiga Yurub waxay ku jiraan moodo. Shineemo, taxane, gastronomy ... wax walba waxay naga dhigayaan inaan rabno ...
Maxaa lagu arkaa Tortosa
Soo ogow waxa aan ku arki karno magaalada Tortosa oo ku taal Catalonia, oo ah magaalo taariikh badan iyo taallooyin lagu booqdo.
Marka loo eego cabirkeeda, Cáceres waxay noqon kartaa magaalada ugu taarikhda weyn Spain. Waxaan kuu sharxeynaa waxa la arko si loo ogaado waxa ugu muhiimsan magaalada.
Las Médulas, Dhaxalka Adduunka
Isbaanishku wuxuu leeyahay muuqaallo qurxoon oo qurxoon qaarna maahan shaqooyinka dabiiciga laakiin waa nin iyo howlihiisa joogtada ah ...
Sidee ku saabsan ogaanshaha Tenerife maanta? Waxaan ku bilaabeynaa usbuuca kan ugu weyn toddobada Canary Islands, weyn ...
Hareeraha Wabiga Tagus: magaalooyin si loo ogaado
Wabiga Tagus wuxuu maraa in kabadan kun kiilomitir inta udhaxeysa Spain iyo Portugal. Waxaan ku tusineynaa waxaad ku arki karto magaalooyinka waaweyn ee ay ku maydho.
Rome way qurxoon tahay sanadka oo dhan, laakiin maaddaama soojiidasho badan ay bannaanka ka joogaan guga ama ...
Qasriga Aljafería ee quruxda badan
Isbaanishku wuxuu leeyahay qalcado badan oo qadiimi ah, qalcado iyo qasriyo qaarkoodna waxay dib ugu noqdeen waqtigii xukunka ...
Maxaa lagu arkaa Berlin
Berlin waa mid ka mid ah caasimadaha loogu booqashada badan yahay Yurub inkasta oo mudnaanta la siiyo aysan u ifin sida Paris ama ...
Maxaa lagu arkaa Hindiya
Hindiya waa waddan si dhibyar ereyo laguugu sharixi karo oo aan kaa tagi karin inaadan dan ka lahayn. Waa lagama maarmaan in halkaas loo safro ...
San Andrés de Teixido, oo fiirinaya badda
Haddii aad jeceshahay muuqaalka muuqaalka leh, oo leh buuro, bad iyo cir oo ku dhex milma daruuraha, Galicia ayaa na siisa ...
Dooxada Hunza iyo khuraafaadkii dhalinyarada weligeed jiray
Dooxada Hunza waxay ku taal Baakistaan, waddan sida laga soo xigtay warbaahinta reer galbeedka ay u dhowdahay ...
Maxaa lagu arkaa Sil Canyons-ka Galicia
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu arki karo Cañones del Sil, oo ah goob dabiici ah oo aad ugu raaxeysan karto aragtida iyo safarada doonta.
Maxaa lagu arkaa Santander
Waxaan kuusoo bandhigi doonnaa dhammaan meelaha xiisaha leh ee magaalada Santander, ee Cantabria, oo leh aagga gacanka iyo magaaladeedii hore.
Maxaa lagu arkaa Cádiz
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad ku arki karto kuna sameyn karto magaalada quruxda badan ee Andalus ee Cádiz, oo ka mid ah kuwa ugu faca weyn Yurub.
Maxaa lagu arkaa Mallorca
Waxaan durba joognaa Nofeembar qabowgana si dhab ah ayuu u imanayaa. Haddii aadan jeclayn oo aad ka mid tahay kuwa ...
5 muuqaal dabiici ah oo qurux badan
Dhulkeenu wuxuu leeyahay muuqaal dabiici ah oo qurux badan, waxaan rajeynayaa, in la ilaalin doono waqti ka dib. Waxay nagu xiran tahay markaa waa inaan ...
Safarka dalka Equatorial Guinea
Waxaa jira laba wadan oo kaliya oo Africa ah oo leh luuqadooda rasmiga Isbaanishka midkoodna waa Equatorial Guinea….
Burj Khalifa, oo tilmaamaya cirka
Had iyo jeer waxaan dhahaa bani'aadamku waxay jecel yihiin inay u dhowaadaan jannada, oo ay dhisaan dhismooyin ...
Gaariga fiilada Madrid
Haddii aad socod ku tagto caasimada Spain oo aad rabto inaad ku soo marto socod fiican meelaha sare iyo wanaag ...
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu xiisaha badan Jarmalka waa Düsseldorf. Halkan goobaha taariikhiga ah waxaa lagu daraa jardiinooyin cagaaran, iyo kaniisado ...
Matxafka Markabka Viking, ee Oslo
Vikings waa halyeeyo taariikhda yurub, in mudo ahba waxay ku jireen mood ...
Maxaa lagu arkaa Tokyo
Tokyo waa mid ka mid ah caasimadaha waaweyn ee adduunka. Waa magaalo la gariirta dadka, waxqabadka, fursadaha ...
Matxafka Wax, ee Madrid
Haddii aadan jeclayn matxafyada caadiga ah laakiin aad dhif u tahay, kuwa asalka ah, kuwa gaarka ah, ka dib safarkaaga xiga ee Madrid ha ...
Waxa lagu arko Alquézar
Waxaan kuu sheegeynaa waxa lagu arki karo laguna sameyn karo magaalada Alquézar, oo ku taal Huesca, oo leh magaalo qurux badan oo duug ah iyo jidad socod.
Maxaa lagu arkaa Palos de la Frontera
Magaalada Palos de la Frontera waxay bixisaa meelo badan oo la arko, marka lagu daro waddo ay dhiirrigelisay Discovery of America.
Ka ogaanshaha Rascafría Madrid
Dooxada sare ee cajiibka ah ee Lozoya, oo kudhowaad 100 mitir oo sare iyo inta udhaxeysa laba buurood, waxay ku taal ...
Maxaa lagu arkaa Cuenca
Waxaan ku tuseynaa wax kasta oo lagu arki karo magaalada Cuenca, oo leh guryo caan ah oo sudhan, matxafyo iyo goobo dabiici ah.
Maxaa lagu arkaa Seville laba maalmood gudahood
Seville, waa maxay magaalo! Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan uguna booqashada badan Spain, oo ay ku nool yihiin dad aad u deggan oo ...
Fagaaraha Trafalgar, waa qasab London
London waa magaalo heer caalami ah oo heer sare ah. Waxaan aaminsanahay in macno ahaan ay ka sarreyso New York, iyo in kastoo maanta ...
Madadaalo Jameos del Agua
Jasiiradda Lanzarote, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ku nool Jasiiradaha Canary, waa keyd biosphere sidaa darteed dabeecaddeeda waa ...
Xaafadda Yuhuudda ee Krakow
Mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan ee Krakow waa xaafaddeeda Yuhuudda, oo sidoo kale loo yaqaan Kazimierz, waxaa aasaasay ...
Maxaa lagu arkaa Covarrubias
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu arki karo laguna sameyn karo magaalada Covarrubias, ee gobolka Burgos, oo ah magaalo qurxoon oo qarniyadii dhexe.
Waxa lagu arko Valldemossa, Mallorca
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu arki karo laguna sameyn karo magaalada Valldemossa, oo ku taal Sierra de Tramuntana ee jasiiradda Mallorca.
Fragas do Eume, keynta Galician Atlantic
Waxaan kuu sheegeynaa waxa aad ku arki karto Fragas do Eume, oo ah beero dabiici ah oo leh keymo Atlantic ah oo ku taal gobolka A Coruña.
Hindiya waa meel cajaa’ib leh. Maahan qof walba, in kastoo qaar badan ay dhahaan safar Hindiya ku aado ayaa nolosha wax ka beddelaysa….
Maxaa lagu arkaa jasiiradda Tabarca
Waxaan kuu sheegeynaa waxa aad arki karto iyo sida loo tago jasiiradda quruxda badan ee Tabarca, oo ah meel leh dhaxal badan iyo xeebo dalxiis oo qurux badan.
Waxa lagu arko Setenil de las Bodegas
Waxaan kuu sheegeynaa meelaha xiisaha leh ee magaalada cad ee Setenil de las Bodegas, oo ah magaalo xiiso badan oo Andalusiya ah oo katirsan gobolka Cádiz.
Monastery Stone, oo soo jiidasho leh Zaragoza
Isbaanishku wuxuu leeyahay meelo dalxiis oo aad u tiro badan mararka qaarkoodna waxaad la yaabaysaa sababta aad ugu baxdo inaad u safarto adduunka markii ay jiraan wax badan ...
Maxaa lagu arkaa Waqooyiga Ireland
Muddo sanado ah Waqooyiga Ireland kuma jirin khariidadda dalxiiska, waxaana hadheeyay walaasheed madaxbannaan iyo ...
Maxaa lagu arkaa Riga, Latvia
Waxaan kuu sheegeynaa waxa laga arki karo magaalada Riga, caasimada Latvia, magaalo leh barxado qurux badan iyo taallooyin.
Hal toddobaad gudaha Corsica
Badda Mediterranean waxay leedahay jasiirado badan laakiin seddex kaliya ayaa weyn oo iyaga ka mid ah waa Corsica, janno dabiici ah ...
Maxaa lagu arkaa Mont Saint Michel
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu arki karo Mont Saint Michel qurux badan oo ku taal gobolka Faransiiska ee Normandy, booqasho lama huraan ah.
Praia, meel loo aado Cape Verde
Ma jeceshahay inaad fasax u aaddo Afrika Afrika waxay leedahay meelo la yaab leh, labadaba qaaradda iyo ...
Soojiidashada Hpa-an, ee Myanmar
Koonfur-bari Aasiya waa soojiidashada boorsooyinka, dadka jecel raaxada Aasiya iyo muuqaalka cajiibka ah. Laakiin maxaa had iyo jeer ...
Beerta Qaranka ee Krka, Croatia
Croatia, luul cusub oo ku yaal khariidada dalxiiska Yurub, waxay leedahay meelo badan oo qurux qurux badan leh midkoodna ...
Macbudyada erotic ee Khajuraho, gudaha Hindiya
Hindiya waxay leedahay wax kasta oo ka yimaada xeebo waaweyn, iyada oo loo marayo magaalooyin cajaa'ib leh iyo muuqaal qurxoon ilaa macbudyo iyo barakaysan oo aan lahayn ...
Maxaa lagu arkaa Sighisoara, Romania
Magaalada Sighisoara waxay ku taalaa Romania waxayna leedahay xarun taariikhi qarniyadii dhexe si qurux badan loo ilaaliyay oo xiiso weyn leh.
Ninh Binh, janno ku taal Vietnam
Dhammaan Koonfur-bari Aasiya waa raad kaararka boostada aan la iloobi karin, labadaba muuqaalkiisa cagaaran iyo hantidiisa dhaqameed….
Ulaanbaatar, waa caasimada ugu wasakhaysan aduunka
Mongolia waa waddan Aasiya ah oo aan bad lahayn oo ku dhex jiray xilligii Dagaalkii Qaboobaa ee ku wareegsanaa ...
Salinas de Añana, khasnadda waddanka Basque
Guryaha milixda waa muuqaal dhab ah oo la fiiriyo waxaana jira kuwo na siiya sawirro qurux badan. Waxa fiican ayaa ah…
Maxaa lagu arkaa Périgord Noir
Aagga Périgord Noir wuxuu ku yaal Faransiiska wuxuuna na siiyaa wax walba laga bilaabo godadka taariikhda ilaa tuulooyin qurux badan oo qurux badan.
Soo jiidashada Nepal
Aasiya waa meel safar cajaa'ib leh. Waxay leedahay wax walba, taariikh, muuqaal, dhaqan, diin ... safar loogu tago geeskasta oo ...
Maxaa lagu arkaa Sierra de Gata
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu arki karo ama lagu sameyn karo aagga dabiiciga ah ee Sierra de Gata, meel aan la aqoon oo leh magaalooyin qurux badan.
Maxaa lagu arkaa La Alberca
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu arki karo laguna sameyn karo magaalada La Alberca, oo ah meel soo jiidasho leh oo ku taal gobolka Salamanca.
Socod ku maray Montenegro
Montenegro waa mid ka mid ah wadamada ugu yar Yurub sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan ee aad ka heli karto ...
Hyde Park, waa beer boqortooyo oo ku taal London
Jardiinooyinka ayaa qurxiya magaalooyinka waana goob ku habboon in lagu socdo, la soco laxanka goobta oo lagu nasto inta lagu jiro ...
Qeybta hoose ee Sierra Morena oo 8 kiiloomitir u jirta Córdoba waxay ku taalaa Medina Azahara, magaalada cajiibka ah ee ...
Booqo Matxafka Ingiriiska
Yurub waxay leedahay dhowr madxaf oo aad muhiim ugu ah qiimaha uruurintooda, midkoodna waa ...
Arribis del Duero park dabiiciga ah
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo lagu arki karo laguna sameyn karo deegaanka Arribis del Duero ee dabiiciga ah ee bulshada madax-bannaan ee Castilla y León.
Maxaa lagu arkaa Saint Jean de Luz
Magaalada San Juan de Luz waa meel lagu raaxeysto xilliyada xagaaga oo leh guryo taariikhi ah oo qurux badan oo soo kordhiya soo jiidashada.
Booqo Arc de Triomphe, oo ku yaal Paris
Paris waxay leedahay liis meelo ah oo aadan seegi karin waxayna ka kooban tahay dhismo culus oo xukuma ...
Maxaa lagu arkaa Zumaia
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad ku arki karto magaalada Basque ee Zumaia, magaalo leh xarun taariikhi ah iyo muuqaal dabiici ah oo qurux badan.
Maxaa lagu arkaa Strasbourg
Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo laga arki karo magaalada quruxda badan ee Faransiiska ee Strasbourg, oo leh cathedralkeedii hore, fagaarayaasha iyo Petite France.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aan ka ogaanno magaalada Orbaneja del Castillo, oo ah magaalo yar oo ku taal deegaan dabiici ah oo qurux badan.
The Grotto ee layaabka, layaabka leh ee Huelva
Meelaha ugu hooseeya ee dhulka ayaa dadka u soo jiiday sida samooyinka oo kale. Waxaan hoos u eegeynaa, kor ayaan u eegay ...
Oma forest, keymo farshaxan leh
Saaxiibkey barashada farshaxanka wuxuu ii sheegayaa in Kaymaha Oma ay tahay faragelin. Wax badan kama aqaano ...
Waxa lagu arko Cangas de Onís, Asturias
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo aad ku arki karto safarka adoo maraya magaalada Asturia ee Cangas de Onís, oo u dhow Harooyinka Covadonga.
Booqashada Boqortooyada Madrid
Magaalo sida Madrid ah waxay leedahay meelo badan oo la booqdo haddii aad dalxiis tahay. Dukaamo, jardiinooyin, xaafado, matxafyo iyo dabcan qasriyado….
Maxaa lagu arkaa Dooxada Aran
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan meelaha aad booqan karto ee ku yaal aagga dooxada Aran ee Lleida, oo ku taal Catalan Pyrenees.
Waxa lagu arko Zahara de los Atunes
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad ku arki karto oo aad ku qaban karto magaalada xeebta ah ee Zaraha de los Atunes, oo ku taal gobolka Cádiz.
Buitrago del Lozoya iyo soo jiidashadeeda
Haddii aad jeceshahay magaalooyinka qarniyadii dhexe, meel wanaagsan oo madadaalo lagu tago waa Buitrago del Lozoya, oo aan ka fogeyn Madrid ...
Horta buuraha Maro iyo buluugga badda Alboran, waxba ma soo jeedinayaan in hoosta ...
Maxaa lagu arkaa laguna sameeyaa Taramundi
Soo ogow waxa lagu arki karo laguna sameyn karo magaalada Taramundi, oo ah magaalo miyi ah oo ku taal Asturias oo bixisa hidaha weyn.
Godadka Altamira, kaniisada Sistine ee farshaxanka taariikhda
Daahfurka godadka Altamira dhammaadkii qarnigii XNUMXaad wuxuu ula jeeday isbeddel ku yimid aqoontii laheyd ...
Waxa la arko iyo sida loo tago Luarca
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo la arki karo iyo sida aad ku tagi karto magaalada kalluumeysiga ee Luarca, oo ah meel dalxiis aad u badan oo ku taal Asturias.
Maxay yihiin fjords-ka Norwey?
Dhammaan dadka aan aqaanno ee dalxiis ku reebay noorwiijiga waxay ku soo noqdeen iyagoo cabsi qaba. Dabeecadda ...
Maxaa lagu arkaa Puebla de Sanabria
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad ku arki karto magaalada raaxada leh ee Puebla de Sanabria, oo ku taal gobolka Zamora ee Castilla y León.
Waxaan marwalba ka jeclaa kaniisadaha Gothic qaabab dhismeedka kale, iyo haddii ay kugu dhacdo adiga ...
Lug ku dhex maro Beerta Biyaha, ee Zaragoza
Qaar badan oo ka mid ah dhismooyinka loo dhisay gaar ahaan bandhigyada caalamiga ah ama carwooyinka ayaa dhammaanaya weligood. Kiisku ma yahay…
Waxa lagu arko Ría de Arousa
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad ku arki karto Ría de Arousa, oo ah dhul xeebeed Galicia ah oo aad ku raaxeysan karto magaalooyin qurux badan.
Booqasho Castillo de San Marcos
Spain waxaa ka buuxa qalcado maantana waxaan diirada saareynaa mid aad u qurux badan oo ku taal Cádiz, gudaha ...
Caasimadda Poland, Warsaw, maanta waa magaalo firfircoon oo ku dhow 2 milyan oo qof halkaas oo ...
Florence waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan Talyaaniga. Dad badan ayaa labo ama saddex maalmood ku taga safar aad u ballaaran oo ay ku marayaan waddanka, laakiin runtii anigu waan ahay, ma waxaad u safreysaa Florence? Hagaag, booqo Cathedral-ka Floerncia xitaa haddii aad daalan tahay, fuulo wax ka badan 400 oo tallaabo dulligeeda. Aragtiyadu waa fiican yihiin!
Yurub waxaa ka buuxa kaniisado iyo England sidoo kale waa laga reebi karaa. Tusaale ahaan, magaalada London, waxaad ka arki kartaa quruxda badan ee St. Paul Cathedral, macbud Anglican ah.Ma waxaad aadeysaa London? Ha iloobin inaad booqato Cathedral-ka San Pablo iyo khasnadaha ay ku taal: qolalka, qubbada, khariidadda, koox-kooxeedyada, kaniisadaha. Xaqiiqdii wax walba!
Burburka Roman ugu muhiimsan
Waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah burburka Roomaanka ee ka tirsanaa Boqortooyadii Roomaanka oo weli lagu booqan karo dalal kala duwan.
Jardiinooyinka qaran ee adduunka
Waxaan ka hadleynaa qaar ka mid ah jardiinooyinka qaran ee ugu fiican adduunka, oo leh goobo dabiici ah oo qurux aan la barbardhigi karin iyo qiime deegaan.
Afka Runta, oo ah tii Rome
Rome waa magaalo qurux badan. Waan jeclahay maxaa yeelay waad socon kartaa maalinta oo dhan oo waad layaabi kartaa daqiiqad kasta ...
Waxaa jira munaarado badan oo adduunka ah kuwaas oo asal ahaan fuliya howlaha isgaarsiinta. Waa inaad ku xirnaataa meeraha ka dib ...
Dhismaha Masaajidda Qudus waxaa ku yaal Qubbigii Dhagaxa, oo ah macbad barakaysan oo Islaami ah oo qaata ...
Gabadha Yar ee Copenhagen
Kumaa akhriyin ama akhriyin sheekada The Little Mermaid? Iyo haddii aysan u qorneyn qaab qoraal markaa ...
Waxaa jira taallooyin badan oo qadiimi ah oo naga tagaya cabsi iyo naga yaabin, sidee bay ku sameeyeen dhulka? Laakiin maxaa ...
Xarunta Ganacsiga Adduunka
Labada daarood ee mataanaha ah ee Xarunta Ganacsiga Adduunka waxaa la furay 1973 waxayna ku dhinteen weerarkii argagixiso ee caanka ahaa ee 2011….
Dabeecaddu waxay na siisaa waxyaabo yaab badan, laakiin runtu waxay tahay in ninku sidoo kale abuuro mid u gaar ah iyo wixii la mid ah ...
Haddii aad ka mid tahay kuwa haddaba ka fikiraya xagaaga soo socda maxaa yeelay adigu uma dulqaadatid jiilaalka, markaa waad awoodi kartaa ...
Maxaa lagu arkaa Liverpool
Liverpool waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan England waxayna jirsatay sideed boqol oo sano. Ma ogeyd? Sidoo kale, waxay leedahay meelo badan. England ma aadaysaa? Booqo Liverpool si aad wax badan uga ogaato Beatles-ka, tusaale ahaan, ama ugu raaxeyso aaggeeda dekedda oo gebi ahaanba la dayactiray.
Macbudyada Angkor, waxay la yaabeen Kambodiya
Mid ka mid ah meelaha ugu caansan uguna quruxda badan dalxiis ee Cambodia waa macbudyada Angkor, oo ah dhisme dhagax ah oo kudhowaad inuu liqo kaymaha.Haddii aad safar ugu baxdo Kambodiya ma seegi kartid macbudyada Angkor, sida uga qurux badan ama ka qurux badan Ahraamyada! Of Egipt!
Cidhifyada sixirka ah ee Moher
Cidhifyada Moher waa mid ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee dalxiiska ee Ireland waana haa, waa sixir. Waa wax layaableh jarista kadiska ah ee dhulka markay la kulantay Miyaad jeceshahay buuro? Markaa ha moogaanin Cidhifyada Moher, ee Ireland: kulan cajiib ah oo isugu jira dhul, bad iyo cir.
Florence waa caasimada Tuscany Talyaani ah oo qurux badan, magaalo qadiim ah, qurux badan, qurux badan leh dhaqankana iyo taariikhdeeda. Wax walba oo halkan ku yaal ayaa xiiso leh oo Florence waa goob dalxiis oo weyn oo Talyaani ah mana seegi kartid. Matxafyada farshaxanka iyo taariikhda, jidadka dhexe, fagaarayaasha, wabiyada, buuraha iyo, dabcan, cuntada!
Ku soo wareeji Châteaux ee Loire
Haddii aad ku sugnaan doontid Paris maalmo yar, marwalba waad iska diiwaan gelin kartaa booqashada qalcadaha Loire. Sinnaba sinaba uma ogaan doontid dhammaantood, waa tiro yar yihiin, Yurub waxaa ka buuxa qalcado, laakiin ma jiraan wax la mid ah qalcadaha iyo quruxda badan ee Loire ee Faransiiska. Ma iska qortaa inaad la kulanto?
Waxaan sii wadeynaa qorshaheena dalxiis ee banaanka, cirka hoostiisa, anagoo laxariirna dabeecada iyo buuraha dhexdooda. Maanta waa wareegii Jungle Miyaad jeceshahay socodka, khadadka diritaanka, fuulitaanka, ku dhex socoshada furka iyo geedaha beech? Kadib booqo Selva de Oza iyo quruxdeeda dabiiciga ah.
5 Xeebaha Fuerteventura ee fasaxaaga xiga
Fuerteventura waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan uguna gaarka ah jasiiradaha Canary sababtoo ah dhul qalalan iyo dhul-gariir….
Castillo de Colomares, oo ah qalcad aad u casri ah
Yurub waxaa ka buuxa qalcado dhammaan noocyada iyo da 'kasta, Spain gudaheeda runtiina wax badan ayaa laga kala dooran karaa. Laakiin maanta ma lihin dhisme qarniyadii dhexe ama gudaha Haddii aad xiisaynayso waxyaabo qariib ah ama aad jeceshahay kitsch, ka dib ku lugee Malaga oo soo baro Castillo de Colomares, oo ah meel waalan.
Godadka Zugarramurdi, oo ku yaal Navarra
Navarra waxay umuuqataa inay kusocoto wadada Actualidad Viajes waayadan dambe, waxayna leedahay khasnado badan oo taariikhi ah, dhaqan iyo dabiici ah. Maanta waxaa noo yeeray Ma waxaad jeceshahay saaxiradda iyo dabka? Hagaag, tag Navarra oo baro baro Godadka Zugarramurdi, oo caan ku ah cibaadada jaahilka.
Ibiza oo leh carruur
Markii aan ka fikirno Ibiza, waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhacayaa waa jasiirad ay ka buuxaan discos, pubs iyo coves ...
Toddobaadkan gudahiisa waxaan ka hadlaynaa soo jiidasho u dhaxaysa Aragon iyo Navarra, oo ah Kaydka Yesa. Meelaha loo dalxiis tago ee aaggan waxaan ku magacawnaa Ma jeceshahay Kaniisadaha qarniyadii dhexe? Dalxiis ku samee meelaha ugu quruxda badan Navarra: Monastery of Leyre, halkaas oo ay ku nastaan ​​boqorradii ugu horreeyay ee Navarre.
Inta udhaxeysa Navarra iyo Zaragoza waa keydka aad ku aragto sawirka: Kaydka Yesa. Ma jeceshahay Waa dhul qurxoon oo waliba taariikhdiisa leh, sidaa darteed Haddii aad jeceshahay dabeecadda, tuulooyinka laga tagay, monasteriyadaha qarniyadii dhexe iyo qorraxda, markaa ha moogaanin Kaydka Yesa.
7 qoob ka ciyaarka aduunka
Hiddaha dhaqanku waa dhaqanka hiddaha iyo dhaqanka ee dad sameeya aqoonsigiisa oo ay u kala gudbiyaan jiilba jiil ...
Jasiiradda Jutland waa qoor qurux badan oo dhul ay wadaagaan laba dal. Qeyb waa Jarmal, qeybta kalena waa deenish. Waxay leedahay muuqaal qurux badan Danmark! Waad tagtay Waa hagaag, waxay leedahay muuqaallo badan oo cajiib ah qaar ka mid ah kuwa ugu quruxda badanina waxay ku yaalliin jasiiradda Jylland.
Meelaha loo maro baxsiga miyiga
Dayrtaan, waxaa jira ciidao badan oo kufiican safarka. Waqooyiga ilaa koonfur iyo ...
Taallada adduunka ugu muhiimsan waa in la booqdaa ugu yaraan hal jeer noloshaada, sidaa darteed waxaan sameyn doonnaa liis gaagaaban.
Boqortooyada Boqortooyada ee San Juan de la Peña
Haddii Spain wax ka buuxaan, waa kaniisado iyo monasteriyado, saw maaha? Hagaag, Aragon waxaan ku aragnaa midkan aan ku aragno sawirka: Boqortooyada Boqortooyada Spain waxay leedahay monasteriyaal badan midna kuwa ugu qaaska ah, meesha ay ku taal awgood, waa Monastery Royal ee San Juan de la Peña.
Magaalooyin qurux badan oo u dhow Barcelona
Guud ahaan Catalonia iyo gaar ahaan gobolka Barcelona waxay leeyihiin magaalooyin badan oo qurux badan oo la booqdo ...
Sanadkii hore ee 2017 magaalada Madrid waxaa soo booqday in ka badan 9 milyan oo dalxiisayaal ah. Taas oo macnaheedu ahaa kordhinta ...
Fushimi Inari, macbudka kun albaab
Japan waxay leedahay meelo cajaa’ib leh, taladayduna waa inaan booqdo marar badan maxaa yeelay mid uun kuma filna. Waxaan u socdaa marki afaraad walina waxaa harsan kuwa aad u fara badan. Ma waxaad aadeysaa Japan oo ma qorsheyneysaa inaad booqato Kyoto? Kadib usocoto 5 daqiiqo oo kaliya oo booqo Masaajidka Fushimi Inari, oo ah kan kun albaab leh.
Hay'adda UNESCO ayaa ku dhawaaqday keydka Biosphere, Las Bardenas Reales waa jardiin dabiici ah oo qurux badan oo duurjoog ah iyo muuqaal ...
Slovenia waa wadan si tartiib tartiib ah ugusoo adkaanaaya meelaha loo dalxiis tago Yurub. Waa qurux badan yahay! Waxaa ka mid ah magaalooyinkeedii qarniyadii dhexe iyo mid ka mid ah luulyada dalxiiska ee Slovenia waa Lake Bled. Waxay umuuqataa sheeko xariir! Island, kaniisad qurux badan, qalcaddii dhexe ...
Maxaa lagu arkaa Oslo
Maanta sheekooyinka dembiyada iyo taxanaha telefishanka ee ka imanaya waqooyiga Yurub waa kuwo moodada. On Netflix waxaa jira wax soo saar badan oo Iswiidhish ah, Oslo waa magaalo cajiib ah maalmo yar gudahood waxaad ku booqan kartaa meelaha ugu muhiimsan ee dalxiiska: qalcadaha, matxafyada, maraakiibta Viking ...
Oberammergau, waa magaalo sheeko xariir ah
Waxaa jira magaalooyin badan oo Yurub ku yaal oo umuuqda in laga soo qaatay sheekooyinkaas sheeko xariirka ah ee aan carruurta u aqrinay. Jarmalku wuxuu leeyahay dhowr midkoodna waa magaalo yar.Ma jeceshahay magaalooyin sheeko xariir ah? Marka markaad u safreyso Jarmalka booqo Oberammergau, magaalada hore iyo magaalada baroque.
Waxaa jira wadooyin iyo wadiiqooyin, jidad na mari kara dhul qurux badan iyo kuwo kale oo innaga gala taariikhda dhismaha iyo diinta. Midda dambe Mid ka mid ah waddooyinka dalxiis ee ugu quruxda badan Spain waa Marinka Cistercian: wuxuu isku daraa diinta, dhismaha iyo taariikhda dhowr kiiloomitir.
Daarta Dukes-yada Infantado, ee ku taal Guadalajara, waa dhismaha ugu quruxda badan magaalada Castilian-La Mancha. Taallo la shaaciyay ...
Valle de Nuria waa dooxada Pyrenees oo ku taal 2.000 oo mitir oo ka saraysa heerka badda ee ...
Boortaqiiska waxaa ku yaal magaalooyin badan oo xiiso leh oo qurux badan waxaanna ka wada hadalnay qaar ka mid ah halkaan oo ku yaal Actualidad Viajes. Maanta waa markiisa.Haddii aad booqato Lisbon, ha ilaawin inaad u dalxiis tagto Santaurio de Fátima, aad ayey u dhowdahay, way qurux badan tahay, wayna weyn tahay waxaana ku buuxa suugaan
Maxaa lagu arkaa Santiago de Compostela
Santiago de Compostela waa, oo ay weheliyaan Rome iyo Jerusalem, mid ka mid ah magaalooyinka barakaysan ee Masiixiyadda. Goorma qarnigii ...
Mid ka mid ah dhismooyinka ugu caansan ee Malaysia waa Petronas Towers. Waxaa laga yaabaa inaadan aqoon magaceeda laakiin hubaal waxaad marar badan aragtay muuqaalka laba-geesoodka ah Mid ka mid ah dhismooyinka dhaadheer ee ugu quruxda badan adduunka waa Petronas Towers of Malaysia. Iyagu waa taajka Kuala Lumpur adiguna ma tabi kartid.
Dhamaanteen waan maqalnay sheekada Anne Frank. Si uun ama mid kale, akhriska buugga, filimka, dokumentariga ah ama si fudud maxaa yeelay mid ka mid ah matxafyada ugu booqashada badan Nederland waa Anne Frank House, oo ah gurigii ay Anne iyo qoyskeedu kaga dhuunteen Naasiyiinta WWII
Godadkii qadiimiga ahaa ee Artá ​​waxay ku yaalliin Mallorca waxayna ku bixiyaan booqasho xiiso leh jasiiradda, oo leh qaabab hore.
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan adduunka shaki la’aan Rome. Iyada oo kumanaan sano oo taariikh ah ay wax u leedahay qof walba: burburka qadiimiga ah, dhismayaasha Rome waa magaalo daa'im ah: soo hel waxa la arko, waxa aan la seegin, halka laga lugeeyo, waddooyinka la raaco, sida looga faa'iideysto marinka Rome iwm
Maxaa lagu arkaa Garganta la Olla
Xagaaga ee Extremadura? Ka dib ku dhex lugee Garganta la Olla, soco jidadkeeda, baro baro guryaheedii hore oo naftaada ku raaxayso meelaha biyo-dhaca ah iyo barkadaha dabiiciga ah.
Xaafadda Santa Cruz, ee ku taal Seville
Ka waran socod ku socda xaafadda Santa Cruz, ee badhtamaha Seville? Guryo duug ah, cathedral-ka, barxadaha, fagaaraha iyo meelo badan oo loo yaqaan 'tapas'.
Tuulooyinka ugu quruxda badan Sierra de Aracena (Huelva)
Sierra de Aracena iyo Picos de Aroche Park Park, oo badanaa loo yaqaan Sierra de Huelva, waa ...
Maxaa lagu arkaa Sierra de Cádiz
Dadka badankood waxay badanaa la xiriiraan Cádiz qorraxda iyo dalxiiska xeebta, si ay ugu raaxaystaan ​​...
Waxa lagu arko Niebla, Huelva
Magaalada Niebla ee Huelva waxay leedahay hidaha iyo dhaqanka taariikh weyn, oo leh darbiyo caan ah iyo meelo kale oo xiiso leh.
Maxaa lagu arkaa Évora
Xagaagan waxaad aadi kartaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn uguna quruxda badan Yurub: Évora, Boortaqiiska: kaniisadaha, macbudyada Roomaanka, ragga.
Waxa laga qabanayo León
León waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee Isbaanishka, in kasta oo laga yaabo in laga aqoon yar yahay magaalooyinka kale ee dalka, haddana ...
Maxaa lagu arkaa Marbella
Marbella waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan Malaga waxaana lagu tiriyaa inay tahay caasimada Xeebta ...
Maxaa lagu arkaa dooxada Jerte, Extremadura
Valle del Jerte waxay ku taalaa Extremadura waxayna bixisaa meelo badan oo dabiici ah oo qurux badan, iyo waliba magaalooyin yaryar oo la booqdo.
Xagaagan waxaad booqan kartaa Morella, oo ah magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Spain: biyo mareenka, qalcaddii dhexe, mootooyinka madow ...
Tuscany Isbaanish ah, waxa lagu arko Matarraña (Teruel)
Meel u dhow badda Mediterranean, oo ku taal xadka u dhexeeya Valencia, Aragon iyo Catalonia iyo qarsoon inta u dhexeysa Hoose Aragon, Maestrazgo ...
Maxaa lagu arkaa Astorga, gobolka León
Magaalada Leonor ee Astorga waa meel loo maro Camino de Santiago laakiin sidoo kale waa meel taariikhi ah oo laga ogaado.
Maxaa lagu arkaa Cunnada, Belgium
Maxay saxophones Gothic, godadka iyo cathedral ka wadaagaan? Dinant, waa magaalo yar oo qurux badan oo ka tirsan gobolka Wallonia ee dalka Beljam.
Waxa laga arki karo Jerez de la Frontera, Andalusia
Magaalada Jerez de la Frontera waxay leedahay xarun qurux badan oo taariikhi ah iyo taalooyin badan oo la arko marka la booqanayo meelaha ay xiiseynayaan.
Lamego, maxaa lagu arkaa luulkan Boortaqiiska ah
Ma Bortuqiis baad aadeysaa Markaa ha iloobin inaad booqato Lamego, oo aad ugu dhow Porto: waa luul dalxiis oo leh beero canab ah, qalcad, kaniisado, xaflado iyo ciidaha.
Spain waa dal soo jiidasho leh. Kaliya kuma hadalno arrimo dhaqan ama gaashanji ahaan laakiin sidoo kale dabiici. Waqooyiga ilaa koonfur…
Lug ku dhex mari Río Mundo oo ku taal Albacete
Inta udhaxeysa Sierra del Segura iyo Sierra de Alcaraz, ee Albacete, waxaa kuyaala Los Calares Park Park ...
Beerta ereyada, waa in lagu arko Tokyo
Safar ma u aadaysaa Tokyo? Mid ka mid ah jardiinooyinka ugu quruxda badan magaalada waa Shinjuku Gyoen, isla kan ayaa lagu muujiyay anime The Garden of Words.
Xagee loo safraa Nofeembar
Nofeembar waa bil bilaabata xilliga qabowga. Marka waxay u muuqataa inaad rabto mid dheeri ah ...
Baro quruxda Mekong Delta
Mid ka mid ah luulyada dalxiiska ee Vietnam waa Mekong Delta, laakiin ma mudan tahay in la arko mise waa laga badbadiyay? Halkan waxaa ku qoran macluumaad, talooyin iyo meelaha qaarkood.
Xagee loo safraa bisha Oktoobar
Sawir | Dalxiiska Asturias Miyaad badbaadin doontaa dhowr maalmood oo fasax ah oo aad rabto inaad ka faa'iideysato iyaga bisha Oktoobar? Xikmad xulan! Markii the
Xagee loo socdaa bisha Sebtember
Markay dhammaadaan Luulyo iyo Ogosto, waxaan ogaanay inay fasaxyadii dhammaadeen oo diiqadii ka dib niyad-jabka yimid ...
Cap de Creus, dhul, qorrax iyo bad
Sidee ku saabsan ogaanshaha barta bari ee Spain? Waa Cap de Creus., Catalonia, waa meel isku darsanta dhulka iyo badda sida kuwa kale oo yar.
Sanctuary of fireflies, waa yaab Mexico
Mexico waxay leedahay mid kamid ah meelaha ugu quruxda badan dab-damiska adduunka. Miyaadan rabin inaad ku dhex socoto mugdiga oo ay ku hareeraysan yihiin kumanaan qodob oo iftiin ah?
Maxaa lagu arkaa Ávila hal maalin
Darbiyada qadiimiga ah ee Ávila waa astaanta magaaladan Castilian-Leonese ee muddada dheer dagganayd. Isbaanishka badankood waa ...
Laguna Negra, oo ku taal koonfurta Argentina
Ma waxaad u socotaa koonfurta Argentina? Ma jeceshahay socodka Markaa ha seegin wadada loo maro Maraakiibta Madow: keymaha, dhagaxyada, xeebta.
5 Sirta Madrid oo ay tahay inaad ogaato
Maaddaama ay tahay caasimadda Spain, Madrid waa magaalo caalami ah oo ka buuxa taallooyin, maqaayado, dukaamo, jardiinooyin, matxafyo, iwm. taas oo bixisa dad badan ...
Dhaqanka Japan, sida soo jiidashada leh maadaama ay gaar tahay
Dhaqanka Jabbaan ayaa ah mid la yaab leh oo aan cidina dhayalsan markay go’aansanayaan inay booqdaan waddanka. Miyaad ku dhiirrataa inaad foorarsato, kabaha iska bixiso oo aad ku noolaato dhaqanka otaku?
Berlin saddex maalmood gudahood
Maxaad ka ogaan kartaa magaalada Berlin saddex maalmood gudahood? Waa hagaag, waa sidaas, waxay tilmaamaysaa hageheena 72-ka saacadood ee Berlin: matxafyada, laba jibbaaranaha, Gidaarka ...
Saddex jasiiradood oo dahsoon ayaa ku faafay Yurub oo dhan
Mararka qaar dhammaanteen waxaan ku riyoonnay inaan u safrinno meel qalaad oo qallafsan taas oo naga dhigaysa inaan nafteenna u qaadno ...
Wadada Tuulooyinka Cad ee waqooyiga Cádiz
Hab wanaagsan oo lagu barto koonfurta Spain, gaar ahaan Andalusia, waa marin loo maro tuulooyinka cadcad ...
Booqo Sanctuary ee Bien Aparecida
Isbaanishku wuxuu leeyahay meelo badan oo diin lagu taliyo. Maxaad u booqan weyday meesha quduuska ah ee Virgen de la Bien Aparecida, oo ah wadaadka ugu caansan ee Cantabria?
Qaar ka mid ah barkadaha dabiiciga ee ugu fiican adduunka
Ma jeceshahay biyaha, dabaasha, xoqida, baashaalka? Ka dib qor magaca barkadaha dabiiciga ee ugu fiican adduunka.
Camden Town, xaafadda kale ee London
Si aad u barato London beddelka ugu badan, wax ka fiican ma jiro inaad aado Camden Town, oo ah xaafad caan ku ah suuqyada xad-dhaafka ah ...
Cuevas del Soplao, oo ah god aad u qurux badan oo dunida u gaar ah
Waxaa loo yaqaan 'Sistine Chapel of Geology', godadka Soplao waa mid ka mid ah taariikhihii geology ...
Maxaa lagu arkaa Malta, halka loo socdo Yurub
Hore u soco oo booqo Malta xagaagan. Waxay leedahay xeebo, matxafyo, taariikh hore iyo taariikh facweyn. Ma caajisi doontid ilbiriqsi!
The Giant's Causeway, waa yaab dabiici ah gudaha Ireland
Waqooyiga Ireland waxay leedahay layaab dabiici ah oo lala yaabo: Jidka weyn ee kooxda weyn! Tiirarka Basalt ee u dhexeeya berriga iyo badda ...
Cidhifyada Moher, booqashada gaarka ah ee Ireland
Ha ka maqnaan mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee soo jiidashada leh ee Ireland iyo mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka: Cidhifka Moher!
Macbudyada cajiibka ah ee Ayutthaya
Thailand waa cajaa’ib waana taas sababta haddii aad jeceshahay dhaqanka, hubi inaad booqato burburka Ayuttahaya, oo aad ugu dhow Bangkok. Daaraha waaweyn, macbadyada, taallooyinka Buddha.
Xeebaha ugu fiican adduunka ee la booqdo
Xeeb wanaagsan waxay aad uga badan tahay meel lagu dabaasho. Waa meel lagu nasto oo lagu raaxeysto ...
The catacombs ee Rome
Baro Qasriga Bran
Haddii aad jeceshahay sheekada Count Dracula, waad booqan kartaa Bran Castle ee Romania ... oo xitaa waxaad ku qaadan kartaa habeen Halloween ah oo aan la ilaawi karin!
Belchite, oo ah meel taariikh u leh Zaragoza
Ista ayaa soo socota oo Isbaanishka waxaad booqan kartaa Belchite, oo ah magaalada cirfiidka ah ee Dagaalkii Sokeeye. Kaalay oo ku soo soco meelaheeda burbursan habeenkii!
Sintra, waxa lagu arko laguna sameeyo magaalada Boortaqiiska
Soo ogow waxaad ku aragtid kuna qaban kartid magaalada Boortaqiiska ee Sintra, masaafo yarna u jirta Lisbon, oo ah magaalo ay ka buuxaan daaraha waaweyn iyo meelo dabiici ah oo qurux badan.
Keydka Irati, waa keynta ugu weyn ee Yurubta ka dib kaymaha madow
Waqooyiga Spain waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Spain. Looma baahna in loo safro ...
Dooxadii dhacday ee Madrid
Buuraha waqooyiga Madrid waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee lagu booqdo bulshada dhexdeeda. Meel…
Ha iloobin Playa del Carmén iyo Tulúm, booqo goobta cajiibka ah ee Grutas de Tolantongo. Waa lama iloobaan! Grottoes, balliyada, ilaha kulul, tunnelka, stalagmites iyo stalactites.
Goobta Boqortooyada ee Beerta Segovia
80 kiilomitir Madrid iyo 13 kiiloomitir Segovia waa Real Sitio de la Granja de ...
Barxadda Cas ee Ruushka, waa inay aragtaa
Miyaad aadeysaa Russia si aad u aragto Koobka Adduunka 2018? Kadib u gudub dhammaan Fagaaraha Cas: matxafyada, daaraha waaweyn, taallooyinka waaweyn, mausoleum-yada. Waxay leedahay wax walba.
Maxaa lagu arkaa Almería
Soo ogow wax kasta oo aad ku arki karto Almería, laga bilaabo goobaha dalxiiska ee magaalada illaa meelaha ugu muhiimsan ee gobolka, sida lamadegaanka Tabernas ee caanka ah.
11 meelood oo aad u yar booqashooyinka adduunka
Sanadkii la soo dhaafay Spain ayaa jabisay rikoorkeeda dalxiisayaasha caalamiga ah iyadoo ay yimaadeen 82 milyan, oo u dhiganta 8,9% ...
Baro Islet of Vila Franca do Campo
Haddii aad jeceshahay jasiiradaha ama meelaha xiisaha leh, booqo jasiiradda Vila Franca ee Azores. Lagoon ku xiran badda, xeeb yar, meel riyo ah.
Kiev wuxuu si fiican isugu daraa qarniyadii dhexe iyo taariikhda casriga ah: cathedral iyo derbiyada, boholaha, dhismayaasha Soofiyeedka, taangiyada Ruushka iyo xusuusta Chernobyl.
Ma qorsheyneysaa safar Israel? Ha uga tagin Tel Aviv tuubada, taariikhdeeda, xaafadaheeda, xeebteeda, dalxiisyadeeda ilaa Badda Dhimatay ama Masada.
Waxa lagu booqdo Hanoi
Vietnam waa caasimada Hanoi waxayna leedahay taariikh ka badan kun sano sidaa darteed ha moogaanin mid ka mid ah goobaha dalxiiska.
Huanglong, balliyo midabbo badan leh iyo Dhaxalka Adduunka
Marabtaa inaad aragto dhulka sixirka ah ee Shiinaha? Entocnes waxay u safreysaa Sichuan oo waxay booqataa Huanglong, balliyo midabo badan leh, ilo kulul, keymo, pandas, macbadyo
Cathedral-ka Justo ee Mejorada del Campo, Hantida Danaha Dhaqanka?
Laga soo bilaabo dhagaxii ugu horreeyay ee la dhigo Oktoobar 1961 maalintii Virgen del Pilar ilaa maanta, ...
Matxafka Sephardic ee Toledo, safar ku saabsan dhaqanka Yuhuudda Isbaanishka
Waxay ku taal xaafaddii hore ee Yuhuudda ee Toledo oo loo tixgeliyey sunagoggii qarniyadii dhexe ee ugu fiicnaa adduunka, waxaan ka helnaa Sinagog ...
Caral, dalxiiska qadiimiga ah ee Peru
Wax walba maahan Machu Picchu oo ku sugan Peru. Burburka Caral waa qurux, waayeel iyo Dhaxal Adduun.
Sapporo, waqooyiga fog ee Japan
Waqooyiga Jabbaan waa yar tahay laakiin aad bay u qurux badan tahay. Sapporo wuxuu kugu sugayaa buuraheeda, farshaxankiisa barafka, keymaha iyo beeraheeda lavender.
Booqo Lake Titicaca, la yaab Peru
Peru waa meel aad u wanaagsan oo Koonfurta Ameerika ah iyo harada Titicaca waa mid ka mid ah harooyinka ugu quruxda badan adduunka: jasiiradaha totora, kayak, burburka qadiimiga ah ...
Ma waxaad aadeysaa Peru? Ma booqan doontaa Machu Picchu? Ka dib tuuji wadnaha, cabsi ka bixi vertigo oo u kac Huayna Picchu. Waxaa lagugu abaalmarin doonaa aragtida ugu fiican!
8 Dhismeyaal Cajiib ah oo Mega ah oo ka dhacay Shiinaha
Dhadhanka dhismayaasha waaweyn ee Shiinaha waa la ogyahay. Kaliya maahan sababtoo ah waxay u oggolaaneysaa iyaga inay bartaan awoodda ...
Hantida Adduunka ee ugu wanaagsan ee ay ku qiimeeyaan dadka safarka ahi
Maqaalkeenii ugu dambeeyay ee sanadka waxaan kugu soo bandhigeynaa isku-dubaridka kaydka dhaxalka adduunka ee ugu wanaagsan ee ay ku qiimeeyaan safarradu.
100 sano tan iyo markii la helay sawirada godka Villar del Humo
Sannadkii 2017, boqol sano ayaa ka soo wareegtay markii la helay sawirada godadka Villar del Humo, ee gobolka ...
5 qasriyo lama ilaawaan ah oo ku yaal magaalada St.
Ma jiro safar loo galayo Ruushka la’aantii St. Petersburg la’aan. Mana jiraan wax booqasho ah oo ku timaadda St. Petersburg iyada oo aan la booqan daaraha waaweyn ee ugu wanaagsan. Ujeeddo qaado!
Getaways si aad ugu raaxaysato kirismaska ​​meel kale
Waxaan ka hadleynaa fasaxyo qaarkood oo lagu raaxeysan karo inta lagu jiro Kirismaska, meelaha ku nool taariikhahaan si gaar ah.
5 jardiinooyinka magaalooyinka ee Spain oo leh soo jiidasho gaar ah
Xilliga jiilaalka, ka faa'iideyso iftiinka iyo kuleylka qorraxda si aad u sameyso nooc ka mid ah waxqabadka banaanka ...
Maxaa laga qabanayaa Jasiiradaha quruxda badan ee Solomon
Meel fog oo qurux badan Xeebaha, Xeebaha, mangroves, sheekooyinka WWII? Hagaag, intaas oo dhan iyo inbadan waxaad kaheleysaa jasiiradaha Solomon.
5 matxafyo bilaash ah oo aan caan ahayn oo lagu booqdo Madrid
Madrid waxay leedahay shabakad matxafyo ay leedahay dowladda hoose oo aad ka baran karto taariikhda ...
Matxafyada ugu fiican Tokyo
Miyaad aadaysaa Tokyo laakiin ma rabto inaad ku dhacdo matxafyada caadiga ah? Ka dib qor liiska liisaska madxafyada cajiibka ah: samurais, bulaacadaha, origami, dambiilayaal.
20 ee taallooyinka ugu booqashada badan adduunka II
Soo ogow toban taallo oo kale oo aan lagu seegin safaradayada adduunka, oo ay ku jiraan magaalooyin qadiimi ah.
20 ee taallooyinka ugu booqashada badan adduunka I
Maanta waxaan ku tusineynaa tobanka taalood ee adduunka ugu fiican ee aan u maleyneyno inaad booqato, liiska meelaha cajiibka ah.
Dhismayaasha dhaadheer ee ugu wanaagsan Tokyo
Miyaad aadaysaa Tokyo? Kaadhadh wanaagsan oo aan la ilaawi karin ee Tokyo ayaa ah daaraheeda waaweyn iyo munaaradiisa. Hubso inaad booqato Mori Tower, Tokyo Skytree iyo Tokyo Tower.
Sigüenza, laga bilaabo magaalada doncel ilaa meeshii ugu wanaagsanayd ee miyiga 2017
Sannadkan Sigüenza wuxuu ku guuleystay cinwaanka Dalxiiska Dalxiiska Reer Miyiga ee ay bixisay bogga 'Getaway Getaway', kaas oo,…
5 Meelo gaar ah oo lagu booqdo Galicia
Waxaan ku tusineynaa shan geesood oo gaar u ah Galicia oo ay tahay in qof walba booqdo mararka qaarkood, laga bilaabo magaalooyinka ilaa meelaha dabiiciga ah.
Svalbard, meel fog, qabow oo qurux badan
Ma jeceshahay meelaha fogfog, 100% dabiiciga ah? Jasiiradaha Svalbard waa inay ahaadaan wadadaada: glaciers, buuro, belar polar, miino duug ah, cirka buluug
Socod ku dhex socda kaynta caanka ah ee Madrid inta u dhexeysa dawacooyinka iyo amiiradaha
Aniga oo ka faa'iideysaneyna xaqiiqda ah in Madrid ay wali ku raaxeysato heerkulka diiran iyo qorraxda oo ifaysa, qorshe aad u wanaagsan oo la sameeyo dhammaadka usbuuca ...
Ulan Bator, dalxiis fog
Saaxiibkay ayaa ii sheegaya inay jeceshahay safarro qalaad iyo inay u dhimanayso inay ku lumiso waddooyinka Ulan ...